Saddex sifo oo ahmiyad weyn u leh abuurista astaan ​​| Abuurista khadka tooska ah
Seddex sifo oo laga fiirsado marka la sameynayo astaanta
Manuel Ramirez | | logos, Khayraadka
Tallaabooyinka la raacayo abuurista astaan ​​wanaagsan waa inaysan waligood isku mid noqon oo mana aha in hagayaasha naqshadeynta ay noqdaan kuwo gebi ahaanba ah, laakiin waxay noogu adeegaan talo aad u wanaagsan oo ah inaadan lumin raadinta dhamaadka finalka wanaagsan.
Taasi waa sababta kuwan saddex sifo ayaa aad muhiim u ah tilmaam ahaan in la isku dayo in la gaadho ujeeddada oo ah naqshad dhammaystiran oo qancisa macmiilka waxa ay raadinayaan si ay u uur yeelato astaanta iyada oo si xoog leh u soo jiidanaysa dareenka wax soo saarka ama adeegga.
Marka marka la sameynayo astaan ​​cusub, waa muhiim tixgeli mid kasta oo ka mid ah astaamahan inaad isku daydo inaad ka hesho mid kasta oo ka mid ah naqshadaha aan u sameyno nooc kasta oo astaan ​​ah.
Qaabdhismeedka ayaa aasaas u ah qaabka astaanta. Haddii faahfaahinta ku jirta astaanta oo la iska indhatiro khad ayaa lagu dhejiyay qaababka taas oo u taagan inta badan astaanta, waa inaan isweydiino haddii ay sameysmayso laba jibbaaran, goobaabin, saddexagal ama, haddii qaabku guud ahaan leeyahay muuqaal dabiici ah. Khadadkaas la jeexay waxaan ku heli karnaa daabacaadda aasaasiga ah ee astaanta.
Astaamaha ugu guulaha badan raac qaababka ama qaababka ugu fudud. Qaababka joomatari aasaasiga ah sida wareegga, laba jibbaaran, iyo saddexagalka waxay abuuraan aasaas muuqaal weyn u ah qaabeynta astaanta.
Dabeecada astaantu waxay ka kooban tahay walxaha lala wadaago astaanta fudud ama iyada oo loo marayo qaybo iyaga ka mid ah. Waxyaabahaas ayaa noqon kara geesaha wareega ama cirka isku shareeray, dhumucda xariiq, qaab ama midabka midabka noocyada kale.
Aqoonsiga astaanta waa maxay ka dhigaysa mid gaar ah oo ka duwan kuwa kale. Aqoonsiga ayaa go'aaminaya haddii tani ay shaqeyneyso haa ama maya. Haddii aad awoodo inaad aqoonsato sheyga ama adeegga, waxay noqon kartaa mid ka mid ah calaamadaha lagu garto inay leedahay aqoonsi cad oo kooban.
La aqoonsiga waxyaabaha la wadaago Iyada oo loo marayo astaamo kala duwan waxay qayb ka noqoneysaa dabeecadda qaar ka mid ah. Tan waxaan ku kala saari karnaa kala sooca u dhexeeya astaamaha iyo aqoonsiga astaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Seddex sifo oo laga fiirsado marka la sameynayo astaanta
Ugu adeegida koob bun ah qaab farshaxanimo leh
Midabbada dhismaha ee midabka leh ee Maja Wronska